सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्दा युवकले आफ्नो लिं’गले युवतीलाई घोच्न थालेपछि…[भाइरल भिडियो] - Social Video Khabar
अ’श्लील तस्वीर देखाएर अ’त्याचार गरे भन्दै जब अभिनेत्री श्वेतापनि प्रहरीकोमा पुगिन्काठमाडौ । अहिले भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा महिला हिं’साको अर्को एक घटना प्रमुख चर्चाको कारण बन्न पुगेको छ । टिभीकी चर्चित नायिका श्वेता तिवारी धेरै समयदेखि पर्दाबाट हराएकी छिन् । उनी आफ्नो परिवारसँग समय बिताइरहेको बताइन्छ ।
तर अहिले श्वेता र उनका श्रीमानबीच खटपट भइरहेको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार श्वेता एकपटक फेरि घरेलु हिं’साको शि’कार भएकी छिन् र अभिनव (पति) ले आफ्ना सौतेनी छोरी पलकमाथि पनि हात उठा’एको गम्भीर खुलासा भएको छ । गत वर्ष श्वेता र अभिनवबीच केही समस्या चलिरहेको छ ।
तर दुबैले यो कुरा स्विकार गरेका थिएनन् । जहाँ श्वेता यसबारे चुप लागेर बसिन् भने अभिनवले यसलाई अस्विकार गर्न सहज ठानेका थिए । तर अभिनवले रिसमा श्वेताकी छोरी पलकलाई पनि थ’प्पड हा’नेको कुरा श्वेता प्रहरी चौकी पुगेपछि अहिले बाहिर आएको छ ।
श्वेता आफ्नी छोरीसँगै रोइरहेकी थिइन् र चिच्याइरहेकी थिइन् । त्यतिबेला उनकी आमा पनि सँगै भएको बताइन्छ । श्वेताले प्रहरीलाई आफ्नो पति धेरैजसो रक्सीको मातमा मात्र भइरहेका जानकारी दिएकी छिन् । उक्त घटनापछि अभिनवलाई आइतबार करिब १ बजे प्रहरी चौकी पुर्याइयो ।
अभिनवविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ जसमा अभिनवले श्वेताकी छोरी पलकका लागि अ’भद्र भाषासमेत प्रयोग गरेको थिए । श्वेताले अभिनवमाथि छोरीमाथि अ’भद्र टिप्पणी गरेर र अक्टोबर सन् २०१७ मा आफ्नो मोबाइलमा मोडलका अ’श्लील तस्बिर देखाएर उनको (पलकको) शालीनता नष्ट गरेको आरोप लगाइन् ।
तपाईलाई जानकारी गराउँ श्वेताको पहिलो विवाह राजा चौधरीसँग भएको थियो । पहिलो विवाहमा पनि हिं’सा भएको भन्दै सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो , अहिलेको विवाहबाट एक छोरा छन छोरी भने पहिलो पतिबाट जन्मेकी हुन ।
Prevविवाहको पहिलो रात यौन सम्बन्ध राख्ने कि नराख्ने ? यस्ता छन कारणहरु
Nextगेम खेल्दा खेल्दै लुगा झरे पछि एस्तो बेज्जेत -भिडियो
हाम्रै नेपालको यस्तो मन्दिर जहाँ पुगे पछी नबोल्ने बच्चा पनि बोल्छ, सबैको आस्थाको केन्द्र पुरा( भिडियो) हेरेर सम्पूर्ण जानकारी लिनुहोस् हेर्नुहोस
मोटरसाइकल चालकले अवस्य पढ्नुहोला: ढाड जोगाउनोस् नत्र यस्ता समस्याहरुले ज्यान नै जोखिम बनाउन सक्छ
पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन आजको राशिफल : वि.सं.२०७६ साल साउन ०८ गते । बुधबार । ईश्वी सन् २०१९ जुलाई २४ तारिख
हैट ! अर्चनालाई समेत पछि पार्दै यी युबतिको हर्कत लाइभमा आएर आफ्नो कपडा खोल्दै गोप्य अंग देखाउदै गरेको बबाल डान्स भिडियो (नहेरे पछुतो)